Natao ho an'i Maorisy ny Nosy Vanilla Pro-Am Tour 2018
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana ara-panatanjahantena » Natao ho an'i Maorisy ny Nosy Vanilla Pro-Am Tour 2018
Raha hanakimpy ny masonao ianao ary hieritreritra ny toerana tsara indrindra eran'izao tontolo izao hilalaovanao golf, dia mety hieritreritra avy hatrany ireo fampianarana kilasy eran-tany ianao izay nanjary ankafizin'ny kilalao - zavatra manaraka ny lalan'ny Shinnecock Hills na Cypress Point Club. Saingy angamba, ianao dia iray amin'ireo mpilalao golf mahay ary efa mahalala izay atao hoe paradisa golf tsy mampino an'i Maurice, sary ao amin'ilay nosy toy ny nofy no tonga ao an-tsainao fa tsy izany.
The Fianarana golf tsara eto, namboarin'ny sasany amin'ireo mpamolavola sy mpilalao mahay indrindra eto an-tany, dia mirehareha amin'ny fahitana tropikaly feno ravina tendrombohitra volkanika. Ny toeram-pilalaovana kilalao maneran-tany dia manatsara ny manodidina azy tsara tarehy, izay misy sisin-tany maitso morontsiraka fasika misandratra, felatanana voanio ary rano turquoise mamirapiratra; Ireto taranja ireto dia, ara-bakiteny, ny sarin'ny fahalavorariana golf.
Raha mbola tsy nankafizinao ny dianao golf mahafinaritra tany Mauritius ary nitady fialan-tsiny tonga lafatra hanaovana izany ianao dia azonao atao ny mieritreritra ny handray anjara amin'ny fifaninanana golf izay tena mahafinaritra: ny Vanilla Islands Pro-Am Tour 2018 izay atao mandritra ny iray amin'ireo volana tsara indrindra any Maurice, Desambra.
Ity ny zavatra tokony ho fantatrao momba ity hetsika mahavariana ity:
Ny 'Nosy Vanilla' dia manondro an'i Maorisy sy La Réunion
Ny teny hoe 'Vanilla Islands' — na, amin'ny teny frantsay, Les Iles Vanille — dia namboarina ho marika (naorina tamin'ny 2010) izay ampiasaina mba hampiroboroboana ny enina amin'ireo nosy nosy Indiana mahavariana; Madagascar, Maurice, Seychelles, Mayotte, Reunion ary ny Kaomoro. Raha atao teny hafa, ny tanjona dia ny hiarahan'ireo firenena ireo hiaraka amin'ny varotra. Voafidy ny anarana satria ny efatra amin'ireo nosy dia malaza amin'ny vanila maniry (ary ny "Nosy Spice" dia efa nalaina!). Na izany aza, ity fifaninanana ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny vatosoa roa mamirapiratra ao amin'ny vondrona Vondronosy Vanilla fa azo antoka fa izy ireo dia roa amin'ireo malaza indrindra, maningana ary miavaka; Maorisy sy La Réunion.
Maherin'ny efatra ny lalao golf
Amin'ity taona ity, sambany no hisy, ity fifaninanana miavaka ity, mihoatra ny efatra amin'ireo kianja golf tsy mampino indrindra manerana ny nosy roa. Tamin'ny fifaninanana teo aloha, ny mpilalao dia afaka nandray ny manodidina tsara tarehy nahafinaritra sy nahafehy ny taranja Bassin Bleu sy Bourbon Golf Clubs tany Reunion sy Tamarina Golf Club any Maurice. Amin'ity taona ity dia mbola hanana fotoana hilalaovana amin'ireo taranja kintana ireo mpilalao golf, saingy efa nampahafantarina ny fahefatra; ilay Avalon Golf Club mahavariana ary miaraka amina faritra tropikaly mahatalanjona, miloko ary tropikaly izay manjavona anaty rano cerulean eny lavitra eny, lalao amin'ireto maitso ireto dia mampanantena fa tsy ho hadinoina.
Hanamarika ny taona faharoa ity fifaninanana ity amin'ity volana desambra ity
Ny fitsidihan'ny Vanilla Islands Pro-Am dia niditra haingana tao am-pon'ny mpilalao golf mazoto, raha ny marina, amin'ity volana desambra ity (manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 16 desambra 2018), dia hanamarika ny fihodinana faharoa. Miaraka amin'ny fahombiazana goavana amin'ny filalaovana nosy roa mampihetsi-po amin'ny andiany voalohany amin'ny fifaninanana, ny endrika ho an'ny faha-1 dia hijanona ho iray ihany, manome ny mpilalao golf ny fotoana tsy mampino hanararaotra ireo tanjona golfing mahafinaritra ireo, miaraka, mazava ho azy, ny fampidirana ny taranja golf fahaefatra (araka ny voalaza etsy ambony). Miaraka amin'ny taona lasa manaitaitra kokoa sy mahaliana kokoa noho ny teo aloha, dia azo antoka fa tsy te-tsy hahita ilay hetsika miavaka amin'ity taona ity ianao.
Ny fifaninanana dia maka endrika endrika Pro-Am (araka ny anarany)
Ny iray amin'ireo ampahany tsara indrindra amin'ity fifaninanana miavaka ity dia ny fandefasana ny endrika fifaninanana Pro-Am, izay midika fa ny mpilalao golf dia hilalao amin'ny vondrona efatra; amateurs telo ary matihanina. Ity endrika ity dia mahatonga ambiansy finamanana, fifaninanana maivana ary fomba hafahafa ahafahana mifandray sy mifandray amin'ireo mpilalao golf hafa. Ity fifaninanana ity dia manome toerana lavorary hizarana ny filanao mahafinaritra amin'ny golf amin'ireo mpilalao mitovy hevitra aminy ary hahazo torohevitra sy torohevitra golf amin'ny toro-hevitra sarobidy avy amin'ireo matihanina golf miaraka aminao sy ireo sisa amin'ireo mpilalao mihoatra ny lavaka 18.
Ireo mpikarakara ny hetsika dia misy anarana lehibe avy amin'ny tontolon'ny golf
Raha ity fifaninanana ity dia manome fotoana mahavariana ho an'ireo mpankafy sy mpomba azy hanatevin-daharana ny hery sy hankafy ny fifaninanana golf amin'ny paradisa, zavatra iray azo antoka, tsy misy zavatra tsy itovizan'ireo mpikarakara. Raha ny marina, misy anarana lehibe sy malaza fanta-daza ao ambadik'ity fifaninanana manaitaitra ity, dia i Jean-Marie Hoareau, avy amin'ny ligin'ny golf any La Réunion sy Patrice Barquez, mpomba golf taloha teo amin'ny Golf Consulting of France. Tongava manosotra soroka amin'ireo sangany sasany amin'ny indostria!
Ao anatin'ny fonosana amin'ny fifaninanana dia hanana fotoana tsy hay hadinoina ny vahiny mpanao golf, hijanona ao amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny kintana dimy tsara indrindra any Maurice; Sugar Beach ho an'ny lalao maorisianina amin'ny fifaninanana. Iray amin'ireo fananana miavaka dimy eo ambanin'ny Vondrona Sun Resorts, ity hotely mihaja eto amin'ny morontsiraka filentehan'ny Maorisy ity dia tsy majika fotsiny.
Avy amin'ny fanomezana sonia tsy manam-paharoa, fanolorana sakafo mahandro ivelan'ny izao tontolo izao, cocktails amoron-dranomasina mahafinaritra ary tsy nampoizina ihany ny mpilalao golf manokana mankany amoron-dranomasina mendri-kaja, fotodrafitrasa eran'izao tontolo izao ary trano tsy manara-penitra voahodidin'ny zaridaina voatrolombelona frantsay, tena tsy nihatsara noho io. Araraoty ny fotoananao any amin'ny paradisa amin'ity hotely kilasy an'izao tontolo izao ity, izay hiantohan'ny mpiara-miasa mahatalanjona anao hanana ny dianao golf amin'ny androm-piainanao rehetra. Ireo mpandray anjara dia manao dia lavitra amin'ny lalao golf.
Raha toa ny fampanantenan'ny trano fandraisam-bahiny misy kintana fivelomana sy tropikaly tsy manam-paharoa manodidina azy izay toa nalaina avy tamin'ny bokikely fitsangatsanganana dia tsy ampy hitaomana anao hamihina ny fitiavanao golf amin'ity volana desambra ity, dia ny fandaharana amin'ity dia golf ity mampihetsi-po dia azo antoka ny hamehezana ny fifanarahana. Raha fintinina, miaraka amin'ny Vanilla Islands Pro-Am Tour, dia voatsabo ianao amin'ny tontolon'ny fanomezana golf mahafinaritra, fisakafoanana VIP, traikefa tsy manam-paharoa ary betsaka, miaraka amin'ny lafin'ny fahalavorariana nosy. Ankoatry ny zon'ny fieboeboana sarotra ekena, dia ho avela aminao ny fahatsiarovana avy amin'ny traikefa golf izay tsy misy idiran'ny lisitry ny siny.
Fitazonana ny zanak'olombelona amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny
World Resorts of Distinction dia manampy ny Resort tsara indrindra eto an-tany amin'ny portfolio